Maviri matsva Apple mavhidhiyo pane Zviyeuchidzo ficha | IPhone nhau
Kunze kwekuwedzera nhau uye kurega vashandisi kuti vawane hupenyu hushoma mukuvaita kuti vashande pa iPhone, Apple yanga ichitaridza hushoma hunyengeri mumavhidhiyo mapfupi kwechinguva kuitira kuti tizive mashandiro avo. Mune ino kesi uye mushure mekuona kushambadzira kutsva kubva kuCupertino firm iyo inoreva chaizvo kune "Zviyeuchidzo" sarudzo, nhasi vanotiratidza mumavhidhiyo akati wandei nezve gadziridza zviyeuchidzo zvedu uye nekugovana navo zvakananga kubva ku iPhone yedu.
Iyi ndiyo vhidhiyo iyo yavanotiratidza mune ingori pasi peminiti maitiro ekuita edu Ekurangarira pane iyo iPhone - iyo sarudzo yatinayo muPhoto application- chimwe chinhu chingaratidzika kunge chiri nyore kune vazhinji, chitsva kune vamwe uye chimwe chinhu chinozivikanwa muzuva ravo zuva nezuva kune vamwe vese:
Vhidhiyo inotevera inoreva mukana we zvakananga kugovera ndangariro pasina chikonzero chekuita matanho mazhinji uye nekukurumidza zvakanyanya. Maitiro ese ari nyore, isu tinosiya iyo Apple vhidhiyo:
Zvirokwazvo Apple inoda kuti isu tibatwe nezvose zvinogadzirwa uye pamusoro pazvose kuti tidzidze kushandisa izere kugona kwesoftware yatinayo mumaoko edu mazuva ese. Mune ino kesi, icho chinhu chatinacho chinowanikwa kubva kuIOS 10 uye kuti isu tine chokwadi chekuti vashandisi vazhinji havatozive, zviripachena ivo vakanyanya kutarisana nerudzi urwu rwevashoma nyanzvi vashandisi, vasingatsvage zvakananga nhau dzinowedzerwa muIOS nekutya kana kungoziva kusaziva.
Izvo ndezvekuwedzera mimhanzi uye nekuita mapfupi mavhidhiyo kushamisa mhuri, shamwari kana kunyange kuzvitsikisa pamasocial network uye ichi chinhu chakanaka kuziva kuti uwane zvakazara mazviri. Mune ino kesi mavhidhiyo maviri matsva uye akawanda akawanda akatarisana nevashandisi vasina ruzivo, uchavawana pane Apple chiteshi pa YouTube.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maviri matsva Apple mavhidhiyo pane yeChirangaridzo ficha